Mavhiki apfuura uye stock yeApple Watch Series 4 haidzokere | Ndinobva mac
Isu takatoyambira mazuva mashoma apfuura kuti kutengesa kuri kunyoreswa neApple nemhando dzayo dze Apple Watch Series 4 uye kunyanya mumodhidhi ine LTE yekubatanidza, iwo haasi zvachose iwo akajairwa iwo ema smart watches. Zvinotaridza kuti panguva ino vawana kiyi chaiyo uye izvo zvinonyatso kuoneka pamwe nesheya yechigadzirwa chavanacho muzvitoro zvavo.
Vazhinji vanogona kutaura kuti zvinokonzerwa nekushomeka kwekugadzira kana kutofungidzira, asi chaizvo zvazvinoratidzika ndezvekuti Apple inokurirwa zvachose nekutengesa kweayo Apple Watch Series 4 uye havagone kutsiva stock chii augurs akareba anomirira kuendesa uye kwenguva yakareba.
Kisimusi yave pedyo nekona
Nhasi kutenga Apple Watch Series 4 mune yepamutemo Apple chitoro ibasa rakaomarara. Uye zvakare, isu tinofanirwa kuwedzera kuti izvo zvinotumirwa zvichiri kunonoka kwemazuva uye nekudaro nhasi kana uchihodha imwe yemawachi izvi zvinoreva kumirira kusvika Mbudzi 20 kuti iendeswe kuchitoro, uye mune Kutumirwa kwemumba kunoratidza misi kubva munaNovember 13 kusvika 20 kutumirwa. Zvese izvi chiratidzo chinoratidza kuti nguva dzekutakura hadzisi kuzodzikiswa mwedzi uno uye saka Mbudzi ichasvika uye inogona kunge yakatonyanya ...
Apple haimboratidze huwandu hwekutengesa hweApple Watch uye panguva ino zvinoita sekunge havazozviita kana pavanopa mhedzisiro yavo yezvemari munaNovember 1, asi mune chero mamiriro ezvinhu zvinonyatsoratidzwa kuti kutengesa kuri nani kupfuura zvaitarisirwa uye imwe yechinyakare. vagadziri vemawoko vatonyevera kuti Apple yakanyanya kuomesa mukwikwidzi nhasi, saka zvinogona kunzi izvo aya Apple Watch Series 4 anga ari kubudirira chaiko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mavhiki apfuura uye stock yeApple Watch Series 4 haina kujairika
Apple ingadai yatenga Asaii, yekunyepedzera njere chikuva chemimhanzi